Siyazazi iinkcukacha zobugcisa beToshiba yeCwecwe | I-Androidsis
Del indawo enye ukusuka apho sihlangane khona nobuso ayakuba nabo IToshiba SmartPad Ngoku sifumana ukucaciswa kwangaphakathi kwesi sixhobo kunye nomfanekiso wento eya kuba sisiseko sayo, inkxaso okanye idokodo. UToshiba ufika enomnqweno wokuzibeka kakuhle kwicandelo kwaye ngenxa yoko khange afune ukukroba kwimithombo yezixhobo eziza kuba yinto yokuqala angena kuyo Android.
Eli cwecwe liza kuza nefayile ye- Iprosesa yeNvidia Tegra 2 Ngubani oza kujongana nokuhambisa Inguqulelo ye-Android 2.2 yenkqubo yokusebenza kwiscreen se-10 intshi ye-WSVGA yesikrini esine-1 × 1024 yeepikseli kunye nekhamera engaphambili ye-600 mpx. Ibandakanya ukugcinwa kwangaphakathi kwe-1,3 Gb kwaye ineentetho ezimbini zestiriyo kunye nemakrofoni ye-16 W.
I-Wifi 802.11 b / g / n indibaniselwano, iBluetooth kunye noqhagamshelo lwedatha ye-3G, le yokugqibela asiyazi ukuba ikhethelwe okanye sele isemgangathweni kwimodeli.
Ngokunxibelelana ngokwasemzimbeni, ine-HSMI, i-USB 2.0 kunye nemveliso encinci ye-USB. Ewe akukho kunqongophala kweslot yamakhadi e-SD kwaye ukwazi ukwandisa amandla ayo.
Izakuza neOpera Mobile Browser efakwe ngenkxaso yeFlash 10.1 kunye noluhlu lwezicelo zeofisi, umfundi wePDF, umfundi we-e-book kunye nomphathi weRSS.
Kuyo yonke le nto kufuneka songeze ukuba inobunzima obungama-760gr kwaye bayathembisa ngobomi bebhetri beeyure eziyi-7 besebenzisa njengesidlali sevidiyo kunye nokukhangela kwiwebhu.
Izixhobo ziya kuba nesiseko esiya kuthi ngokuqinisekileyo sifumaneke njengesongezelelo esiya kuthi sisisebenzisele ukutshaja kwaye sikwazi ukucinga ngokudibanisa ikhibhodi yangaphandle kwaye sikwazi ukusebenza kakuhle.
Igqabazekile malunga nokuba nakho ukufaka isoftware ngakumbi ngokukhuphela ukusuka kwifayile ye- Indawo yentengiso yaseToshiba oko kukwenza ukuba ucinge lonto I-Android Market Ayizukuza kwesi sixhobo kwaye ngenxa yoko kuya kwenzeka nezinye iinkqubo zikaGoogle.
Ukucaciswa okuthile ekufuneka kuthathelwe ingqalelo kwaye kuxhomekeke kumhla wokukhutshwa kwintengiso kwaye ngakumbi amaxabiso ayo inokuba yenye yezona zinto zintle onokukhetha kuzo kolu hlobo lwesixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Siyazazi iinkcukacha zobugcisa beToshiba yeCwecwe
Ndiyathemba ukuba icingelwe ngcono kuneToshiba Journ-e, umbono olungileyo phambi kwabo bonke abanye ungaphuhlanga kakuhle
Le thebhulethi ibukeka intle kakhulu, ngethemba ukuba intengiso iyafikeleleka kodwa iya kuba lihlazo.